Fikarohana momba ny firaisana Ian Stevenson, MD Matemanta fahatsiarovan-doha ny fiainam-pianakaviana vao teraka miaraka amin'ny fitoviana ara-batana: Nawabsingh Reborn tahaka an'i Manoj Kumar - Fikarohana momba ny vatana vaovao
From: Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny biolojia nataon'i Ian Stevenson, MD (pejy 1920-1921)
Ian Stevenson's Documentation of this Past Life Story with Physical Resemblance in Reincarnation Cases
Na dia nilaza aza i Ian Stevenson fa nikaroka ity tranga ity izy tamin'ny 1971 sy 1973, dia nanome tsipiriany vitsivitsy momba ny zavatra hitany izy. Stevenson dia nampiditra ity tranga ity tao amin'ny bokiny, Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny biolojia, ho ohatra iray amin'ny fomba fiasan'ny endriky ny endriky ny endriky ny iray amin'ny fiainana iray manontolo. Kitiho ireo sary mba hanitarana azy ireo.
Nawabsingh Reincarnates ho an'i Manoj Kumar
Teraka tamin'ny volana 30, 1964 tany amin'ny tanànan'i Bhaderi, any Uttar Pradesh, India, i Manoj Kumar. Raha vao 5 taona izy dia nanomboka niresaka momba ny fiainana teo aloha izay nantsoina hoe Nawabsingh.
Ian Stevenson dia afaka nahita fampahafantarana momba ilay olona nolazain'i Manoj fa. Nawabsingh dia nanompo tao amin'ny tafika ao India ary taorian'ny nandroahana azy dia nitodika tany amin'ny fiainana an-tranomaizina izy. Maty tamin'ny Febroary 1964 izy, tamin'ny fifandonana tamin'ny polisy.
Stevenson, tao amin'ny tatitra nataony momba ity raharaha ity, dia nanamarika fa Manoj dia nanao antsipiriany marina marobe momba ny fiainan'i Nawabsingh, na dia tsy namelabelatra aza i Stevenson. Ho fanampin'izay, nanamarika i Stevenson fa resy lahatra izy fa ny fianakavian'i Nawabsingh sy Manoj Kumar dia tsy mifankahalala, ary tsy nifankahalala ihany koa ireo fianakaviana.
Fitoviana ara-batana: Ian Stevenson dia afaka nahazo ny sarin'i Nawabsingh sy Manoj, izay mampiseho endrika mitovy amin'ny tarehy. Tokony hotadidintsika fa ny sarin'i Nawabsingh dia nalaina tamin'ny naha olon-dehibe azy, raha ny sarin'i Manoj dia nalaina tamin'ny fahazazany. Rehefa mihantitra isika dia very ny elastika ny hoditra, ka rehefa mihalehibe isika dia manjary mibontsina na mivonto ny tarehy. Mino aho fa ity anton-javatra ity dia mitaky fahasamihafana eo amin'ny fisehoan'ny tarehy amin'ity tranga ity, toy ny tsy fitovizan'ny sary amin'ny theses sary.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Teraka tamin'ny 7 volana i Manoj taorian'ny nahafatesan'ny polisy Nawabsingh. Raha toa ny fanahy dia tafiditra ao anatin'ny dingan'ny fahaterahana, izay inoako fa izany, dia ny fanahy Nawabsingh | Manoj dia nanentana vatana ara-batana roa tamin'ny fotoana iray nandritra ny volana 2 i Manoj, nihevitra fa navoaka i Manoj taorian'ny fitondrana vohoka 9 volana.
Ian Stevenson dia nantsoina hoe "Ireo tranga miaraka amin'ireo daty tsy voafetra," toy ny andavan'andro amin'ny fotoana voafetra.